Roman Janecka – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Hostel: Part II (2007) Unicode ကွမျးကွမျးတမျးတမျးသတျဖွတျတာတှမှေကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ Saw လိုအသတျကွမျးတဲ့ Hostel2လာပါပီ။ ဒီတဈခါတော့ ကြောငျးသူလေးတှအေပြျောတမျးခရီးထှကျလာရာမှ ဘယျလိုတှအေဖမျးခံရပီး ဘယျလိုတှကွေမျးကွမျးတမျးတမျးအသတျခံရမလဲဆိုတာကိုရငျတထိတျထိတျနဲ့ကွညျ့ရမှာပါ. အဖျောအခြှတျတှပေါတဲ့အပွငျ အသညျးငယျသှေးမွငျကွောကျတကျရငျ လကျရှောငျသငျ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ imdb 5.5 ရထားတဲ့ Horror ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ Zawgyi ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသတ်ဖြတ်တာတွေမှကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Saw လိုအသတ်ကြမ်းတဲ့ Hostel2လာပါပီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျောင်းသူလေးတွေအပျော်တမ်းခရီးထွက်လာရာမှ ဘယ်လိုတွေအဖမ်းခံရပီး ဘယ်လိုတွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအသတ်ခံရမလဲဆိုတာကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရမှာပါ. အဖော်အချွတ်တွေပါတဲ့အပြင် အသည်းငယ်သွေးမြင်ကြောက်တက်ရင် လက်ရှောင်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ imdb 5.5 ရထားတဲ့ Horror ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 5.5/10 86587 votes
Hostel (2005) Unicode Horror ကွမျးကွမျးတှနှေဈသကျသူတှအေတှကျ 2005 တုနျးကထှကျခဲ့တဲ့ Hostel လေးလာပါပီ။ ဒီလိုညအခြိနျမှာမှကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျကွမျးဖွဈပါတယျ။ Amsterdam ကိုလာလညျတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ဘယျလိုနှိပျစကျပီးအသတျခံကရြမလဲဆိုတာကွညျ့ကွညျ့ပါအုံး။ အဖျောအခြှတျတှပေါပီး သတျတာတှကွေမျးလို့ အသညျးငယျရငျ မကွညျ့သငျ့ပါ။ Zawgyi Horror ကြမ်းကြမ်းတွေနှစ်သက်သူတွေအတွက် 2005 တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Hostel လေးလာပါပီ။ ဒီလိုညအချိန်မှာမှကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Amsterdam ကိုလာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လိုနှိပ်စက်ပီးအသတ်ခံကျရမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါအုံး။ အဖော်အချွတ်တွေပါပီး သတ်တာတွေကြမ်းလို့ အသည်းငယ်ရင် မကြည့်သင့်ပါ။
IMDB: 5.9/10 172173 votes